Akụkọ - Lowes, Depot Home na arịa ụlọ patio kacha mma nke Walmart nke 2021
Lowes, Depot Home na arịa ụlọ patio kacha mma nke Walmart nke 2021
Ịtụgharị azụ azụ gị ka ọ bụrụ ọdụ ụgbọ mmiri nke onwe gị nwere ike ịdị ọnụ karịa ka ị chere. Ịchọrọ inwe ike ịnụ ụtọ oge okpomọkụ, zuru ike ma nwee ahụ iru ala dịka o kwere mee-mana ị chọghị ka ọ daa. Ọ dabara nke ọma, ụlọ ahịa dị ka Lowe's, Home Depot, na Walmart nwere ụfọdụ arịa ụlọ dị n'èzí mara mma ịhọrọ site na ya, ya mere ogige gị nwere ike inwe mmetụta okomoko - enweghị mkpado ọnụahịa dị oke elu!
A sị ka e kwuwe, ị na-azụta osisi, ihe ịchọ mma ụlọ, na ihe ndị ọzọ metụtara ụlọ na Lowe's, Home Depot, na Walmart. Gịnị ma ị zụrụ ngwá ụlọ gị n'èzí ebe ahụ?
Nke a bụ oge okpomọkụ nke oche akwa! Ruo ọtụtụ ọnwa, ndị mmadụ na-enwe mmasị na nhọrọ kachasị mma nke ngwaahịa, oche akwa akwa wicker, nnukwu ụlọ ime ụlọ na n'èzí oche oche oche na ihe ndị ọzọ yiri ya. Ọ naghị esiri ike ịhụ ihe kpatara ya - ọ nwere ike ịbụ naanị otu mpempe ngwá ụlọ gị dị n'èzí, mana ọ bụ nkwupụta. Ọ na-agbakwụnye ntakịrị flair bohemian na oghere ọ bụla dị n'èzí ma dị nnọọ mma. Nke a bụ ebe kacha mma iji gbatịa, hie ụra ma ọ bụ gụọ akwụkwọ, iji mee ka ihe ịchọ mma gị dị n'èzí gaa n'ọkwa ọzọ, ụfọdụ eriri ọkụ dị n'elu na-elekwa anya nke ọma!
N'ihi nguzogide ihu igwe nke ihe, wicker terrace sets bụkwa ewu ewu n'oge a. Nke a na-agba aja aja anọ bụ naanị $200, a na-eresị agba ndị ọzọ niile, yana nyocha 412 na Walmart.com. Ọ nwere mkpuchi mkpuchi na-adịgide adịgide, nke mbughari na nke a na-asacha, ya mere mwụfu, ntụpọ, mmiri ozuzo na pollen (er, pollen na-adịghị mma) agaghị abụ nsogbu.
Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu onye ntụrụndụ n'ụlọ, mgbe ahụ ịkwesịrị ịnye oche maka onye ọ bụla na-agafe. Nke a nwere akụkụ anọ nke Costway setịpụrụ bụ otu n'ime arịa ụlọ dị n'èzí a kacha mara ọkwa na Walmart.com. Site na nyocha 647 na kpakpando 4.7 (nke sitere na kpakpando ise), ndị na-azụ ahịa Wal-Mart nwere mmasị na oche na oghere maka ihe na-erughị $350. A na-edozi ihe zuru ezu na sofa abụọ, otu sofas abụọ na tebụl kọfị, na-eme ka onye ọ bụla nwee ike ịchọta ebe dị na mbara ala awa obi ụtọ. A na-eji polyester na-adịgide adịgide mee ihe nkpuchi ahụ, ebe ọ bụ na uwe ahụ n'onwe ya bụ nke polyethylene rattan na ígwè, ọ na-adịgide adịgide.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye oche akwa (ma ọ bụ oche ụdị yiri ya) na mbara ala gị, mgbe ahụ oche mkparịta ụka na-acha aja aja nke Malia Rattan bụ nhọrọ zuru oke. A sị ka e kwuwe, ọ bụ ugbu a oche dị ọnụ ala nke ụdị ya na ahịa. Site na nkọwa rattan n'akụkụ, ọtụtụ canopies square karịa oche oval ọdịnala, ị ga-ahụ ọnụahịa ya n'anya (naanị $ 249.30) na ọdịdị nke oche nkata a na oche gị, ihe owuwu ụzọ mbata ma ọ bụ ubi. Nke a bụ ebe izu ike dị n'èzí.
Ejiri akwa akwa akwa Sunbrella - dị mfe ịsacha, UV ma na-eguzogide ọgwụ, yana mildew na mildew-Allen na Roth Northborough 5-ibe metal frame terrace dialogue set dị mma ma maa mma. Emebere wicker ihu igwe niile ka ọ nagide ihe dị iche iche na-enweghị nkụja, ebe tan na ụda chocolate na-eweta mma na-anọpụ iche n'ogige gị, ya mere ụlọ azụ gị nwere ike bụrụ ebe a na-ahụ anya. A pụkwara ịkwanye "tebụl" ahụ na-ekpuchi ọnụ iji gosipụta nri na ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ kewapụ ya dị ka ebe nkwụsị ụkwụ dị iche iche, ka ndị ọbịa nwee ike ibuli ụkwụ ha ma nọrọ nwa oge.
Naanị anyị chọrọ ịsị: I kwesịrị inwe arịa ụlọ mara mma na olulu ọkụ. A sị ka e kwuwe, ụlọ azụ gị kwesịrị ịbụ ebe dịpụrụ adịpụ nke onwe gị, na ogige nke nwere ọkụ ọkụ nwere ike gbanwee iwu egwuregwu ahụ kpamkpam. Ọ bụghị naanị n'oge okpomọkụ-n'oge niile, ọkụ ọkụ nwere ike ịrụ ọrụ ebube, kpoo gị ọkụ, mee ka ogige gị bụrụ ebe dị jụụ na nke dị jụụ. Ngwongwo patio a nwere akụkụ ise sitere na usoro Whitfield na-egosipụtakwa oche nwere ala na-efegharị efegharị (maka nkasi obi kachasị) yana ihu igwe ejiri aka kpara azụ nke nwere ike iguzogide ule oge na ọnọdụ okpomọkụ.
Ị na-achọ ntọala arịa dị n'èzí ọkaibe karịa? Ọ bụrụ na gị na ezinụlọ gị na-amasị gị iri nri n'èzí mgbe ihu igwe dị ọkụ, mgbe ahụ ị ga-achọ ezigbo ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị n'èzí dị ka nke a. Hampton Bay Laurel Oaks 7-ibe Brown Steel Outdoor Terrace Dining Set nwere ọkwa n'ozuzu nke kpakpando 4.6 (n'ime kpakpando ise) na HomeDepot.com, yana 85% nke ndị ahịa ụlọ Depot na-azụta setịpụ a kwadoro ya maka ndị na-azụ ahịa n'ọdịnihu. Ntọala nke 7 ahụ nwetakwara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nyocha 2,000, na ndị nkatọ nwere mmasị na nkasi obi nke oche-na n'ezie ọnụahịa ahụ.
Oghere ụlọ gị na ogige gbara ya gburugburu kwesịrị ịdị ka paradaịs. Ọ dabara nke ọma, Coco Breeze 3-ibe wicker n'èzí oche nwere ike ibuga gị ozugbo n'agwaetiti ahụ. Tebụl dị n'akụkụ na-anabata atụmatụ rattan dị mgbagwoju anya yana oche azụ abụọ nwere ohiri isi iji mee ka ọ dị gị ka eze nwanyị nke ogige ahụ. Akụkụ atọ nke wicker ahụ na-eguzogide ihu igwe ma yabụ na-adịgide adịgide, ma ị nwere ike webata ha n'ime ụlọ maka ojiji na ọnwa oyi. Ha na-adị ka nkecha n'ime ụlọ gị dị ka na mbara èzí.
Newsweek nwere ike nweta ọrụ site na njikọ dị na ibe a, mana anyị na-akwado naanị ngwaahịa anyị na-akwado. Anyị na-ekere òkè na mmemme mgbasa ozi ndị mmekọ dị iche iche, nke pụtara na anyị nwere ike ịnata ụgwọ ọrụ akwụ ụgwọ maka ngwaahịa ahọpụtara nke edezipụtara site na njikọ na webụsaịtị onye na-ere ahịa anyị.
Oge nzipu: Jun-10-2021